वर्षाका कारण अवरुद्ध हुने सडक तुरुन्त खुलाउन विभागको तयारी - नेपालबहस
वर्षाका कारण अवरुद्ध हुने सडक तुरुन्त खुलाउन विभागको तयारी
२६ जेठ २०७८ | १४:५४:४२ मा प्रकाशित
२६ जेठ,काठमाडौं । वर्षाका कारण बाढी र पहिराले अवरोध पु¥याउँदा सडक तुरुन्त खुलाउन सडक विभागले तयारी शुरु गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, औषधि, अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री आउने सडकलाई लामो समय अवरुद्ध हुन नदिने गरी तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष विगत वर्षभन्दा भारी वर्षा हुनसक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ । त्यस कारण सडकमा बढी क्षति पुग्नसक्ने विभागको सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।
सडक विभागले पहिरो र बाढीको जोखिम भएका सडकको पहिचान गरी त्यसका आधारमा तयारी अघि बढाएको हो । जोखिम भएका कुनकुन ठाउँमा कति उपकरण आवश्यक छन् त्यहीअनुसार हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयहरुमा पत्राचार भइसकेको छ । विभागअन्तर्गत सात हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन छन् । उनले भने, “डिभिजन वा हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।”
अहिले कुनै पनि सडक पहिरो वा बाढीकै कारण अवरुद्ध नरहेको विभागले जनाएको छ । केही दिनपहिले बुटवल–पाल्पा सडक पहिराका कारण अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले खुलाइसकेको छ । उनले भने, “सबै ठाउँमा उपकरण तयारी अवस्थामा नै हुन्छ वर्षा कम हुनासाथ सडक खुलाइन्छ ।”
देशभरमा डिभिजन सडक कार्यालय र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयमार्फत उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको हो । गत आवमा वर्षाको समयमा सडक नै भासिएर लामो समय अवरुद्ध बनेको अरनिको राजमार्ग यस वर्ष लामो समय अवरुद्ध हुने अवस्था नआओस् भनेर तयारी भइरहेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । सामान्य पहिरो तुरुन्त सफा गर्न सकिने भए पनि सडक नै भासिँदा वा ठूलो पहिरो जाँदा तत्काल हटाउन गाह्रो हुन्छ । राजमार्गमा बाह्रबिसे माथितिर अप्ठेरो ‘एलाइनमेन्ट’ रहेको छ ।
उक्त सडकबाट मेडिकल सामान ल्याउनुपर्ने हुँदा पहिराले लामो समय नरोकियोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको अधिकारीले बताए । विभागले पहिरो हटाउन आवश्यक उपकरण तयारीमा राखिसकेको छ । बढी बिग्रने सडक खण्डमा मर्मत भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले निषेधाज्ञाले मजदूर नपाएर काम गर्न गाह्रो भएको छ ।”
विभागले सामान्य पहिरो भएमा तुरुन्त खुलाउन सकिने भए पनि पूरै हटाउन नसक्ने अवस्थामा एकतर्फको पहिरो हटाएर पनि सडक पुनः सञ्चालन गर्दै आएको छ । सडकको एक छेउबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्नसक्ने गरी खुलाइने गरिएको छ । सडक पूरै भासिएर एकतर्फसमेत खुलाउन नसकिने भएमा अर्को कुनै वैकल्पिक सडकको खोजी गरिन्छ । विभिन्न विकल्पमध्ये सडकको अवस्था हेरेर उपयुक्त विकल्प खोजिने उनले बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले यही जेठ १५ गतेदेखि नै सम्भावित ठाउँमा आवश्यक उपकरण राखिएको बताए । उनका अनुसार पहिराको जोखिम भएका ठाउँमा स्काभेटर राखिएको छ । डिभिजनले अहिले भएका उपकरण पर्याप्त नभएको भन्दै विभागसँग थप चार उपकरण माग गरेको छ । केही दिनपहिले बुटवाल–पाल्पा सडक पहिराका कारण दुई दिनसम्म अवरुद्ध बनेको थियो । उनले भने, “सडक खुलाउनका लागि हामीलाई थप उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ ।”
आजदेखि भदौ मसान्तसम्म जथाभाबी सडक खन्न नपाइने १ दिन पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध ३ मिनेट पहिले
सडकका किनारामा तरकारी बिक्री गर्दै महिला ७ मिनेट पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा १० मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? २१ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ३२ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ३४ मिनेट पहिले
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सहज बन्दै बाँकेको जनजीवन ४४ मिनेट पहिले
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने ४७ मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? ५४ मिनेट पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार ६० मिनेट पहिले
मिथिलाञ्चलमा वटसावित्री पर्व मनाइँदै ६ दिन पहिले
न्यायधीशद्वय केसी र श्रेष्ठप्रति आपत्ति २ हप्ता पहिले
अस्ट्रेलियाली सीमा खोल्न अझै सुरक्षित छैनः प्रधानमन्त्री मोरिसन ४ हप्ता पहिले
वार्षिक परीक्षा नलिन पोखरा महानगरको निर्देशन ४ हप्ता पहिले
निर्माणको अन्तिम चरणमा एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल १ वर्ष पहिले
भारतमा एकै दिन तीन लाख ८६ हजार संक्रमति २ महिना पहिले
फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा ५० लाख बढीको क्षति २ महिना पहिले
पूरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक औषधि, कण्डमको झन्झट हट्यो ! ७ महिना पहिले